Articles tagged 'peter chikumba'
Reprieve for ex-Air Zim boss 19 May 2017 HARARE - High Court judge Tawanda Chitapi yesterday extended ex-Air Zimbabwe corporate secretary Grace Pfumbidzayi's bail pending her fresh appeal lodged in the Supreme Court. Pfumbidzayi is challenging her conviction and seven-year imprisonment for criminal abuse of duty, following the recent...
Ex-Air Zim boss bail bid rejected 11 July 2015 HARARE - High Court judge Owen Tagu has denied bail to jailed former Air Zimbabwe boss Peter Chikumba after ruling that he was a flight risk and that he had no prospects of success on appeal. Chikumba is serving an effective seven-year prison term together with former Air Zimbabwe legal secret...
Jailed ex-Air Zim boss optimistic 4 July 2015 HARARE - Jailed former Air Zimbabwe boss, Peter Chikumba, has high prospects of succeeding in his bail application pending appeal, his lawyer Admire Rubaya has said. Rubaya claimed his client's accomplice Grace Pfumbidzayi was a dangerous witness who implicated Chikumba in the Air Zimbabwe fra...
Judge recuses self from Chikumba's bail hearing 30 June 2015 HARARE - High Court judge Garainesu Mawadze has recused himself from hearing a bail application filed by jailed former Air Zimbabwe boss Peter Chikumba, who is challenging his conviction and seven-year prison term. Mawadze said he had handled the matter before when Chikumba and his co-accused ...
Jailed ex-Air Zim boss seeks bail 23 June 2015 HARARE - Jailed former Air Zimbabwe boss Peter Chikumba has filed an application for bail. Harare regional magistrate Fadzai Mtombeni initially jailed Chikumba and Grace Pfumbidzayi for 10 years each. She went on to suspend three years on condition of good behaviour after convicting the two on...
Ex-Air Zim boss' bail bid opposed 28 April 2015 HARARE - Jailed former Air Zimbabwe legal secretary Grace Pfumbidzayi's bail application has been vigorously opposed by the State on the grounds that she was a flight risk. Pfumbidzayi was sentenced to an effective seven years in jail together with former Air Zimbabwe chief executive Peter Chi...
Jailed Chikumba, Pfumbidzayi seek bail 22 April 2015 HARARE - Jailed former Air Zimbabwe boss Peter Chikumba, has filed an appeal challenging his conviction and sentence in the High Court, and has attacked Harare magistrate Fadzai Mtombeni's ruling, claiming the magistrate erred at law. Chikumba was jailed for an effective seven years together w...
Judgment day set for Air Zim bosses 21 March 2015 HARARE - Former Air Zimbabwe bosses Grace Pfumbidzayi and Peter Chikumba will know their fate on April 8 after a Harare magistrate set that date as the duo's judgment day. Pfumbidzayi and Chikumba are jointly charged on allegations of siphoning several millions of dollars from the struggling n...
Air Zim saga: Pfumbidzayi nails Chikumba 10 March 2015 HARARE - Former Air Zimbabwe chief executive officer Peter Chikumba chaired a meeting that resolved to engage Navistar Insurance brokers, a Harare magistrate heard yesterday. Chikumba is jointly charged with former Air Zimbabwe legal secretary Grace Pfumbidzayi on allegations of siphoning seve...
Chikumba denies part in Air Zim fraud 5 March 2015 HARARE - Former Air Zimbabwe (Air Zim) legal secretary Grace Pfumbidzayi acted unilaterally in appointing Navistar Insurance Brokers, a Harare court heard yesterday. This was contrary to the company policy pertaining to signing of business contracts. Pfumbidzayi is jointly charged with Pete...
Ex-Air Zim bosses 'have case to answer' 26 February 2015 HARARE - Former Air Zimbabwe (Air Zim) company secretary Grace Pfumbidzayi and ex-group CEO, Peter Chikumba jointly charged with criminal abuse of duty and contravening the procurement Act will be put to their defence after the court's ruling that they have a case to answer. Pfumbidzayi and Ch...
Air Zim bosses granted bail 4 March 2014 HARARE - High Court Judge Garainesu Mawadze has freed two Air Zimbabwe bosses on $3 000 bail each. Mawadze granted the airline's former chief executive Peter Chikumba and sacked company secretary Grace Pfumbidzayi, both facing fraud charges, bail on stringent conditions.
Ex-AirZim boss lodges bail application 25 February 2014 HARARE - Former Air Zimbabwe (Private) Limited boss Peter Chikumba, currently in custody over fraud charges, has appealed against a Harare magistrate’s ruling denying him bail. Chikumba, 59, is jointly charged with Grace Nyaradzai Pfumbidzai, 49, who was the struggling firm’s legal manager and...
Air Zim bosses remanded in custody 16 February 2014 HARARE - Three Air Zimbabwe (Private) Limited (Air Zimbabwe) bosses, who were arrested on fraud allegations, were yesterday remanded in custody, pending their bail application on Monday. Peter Chikumba, 59, Grace Nyaradzai Pfumbidzai, 49 and Innocent Mavhunga, 53, appeared before Harare magist...